भुवन केसीले गालामा मुख जोडेको भन्दै आक्रोसित भइन् नायिका साम्राज्ञी (भिडियो सहित)
June 30, 2020 3788
सामाजिक संजालमा नायक भूवन केसी र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहविच दोहो री नै चलेको छ । उनीहरुले एक अर्कालाई आरो प लगाउँदै चलचित्र’को छायां’कनका क्रममा भएको एक अर्का’को व्यवहार सार्व जनिक गरिरहेका छन् ।
नायिका साम्राज्ञी राज्य’लक्ष्मी शाहले २ दिन अगाडि सामाजिक संजाल’मा भिडि’यो सार्वजनिक गर्दै आफू’माथि ह्या रेसमेन्ट भएको बताएकी थिइन् । उनले, आफ्नो भिडियोमा कुनै पनि मेकर वा चलचित्रको नाम लिएकी छैनन् । तर, साम्राज्ञीले बारम्बा’र आफ्नो डेब्यू चलचि’त्रमा काम गर्दा आफूमाथि राम्रो व्यव हार नभएको बताउँदै आएकी थिइन् ।
साम्राज्ञीको भिडि’यो सार्वजनिक भएपछि जवाफ दिदै नायक भूवन केसीले जुन थालमा खाने त्यही थालमा प्वाल पार्ने भनेर ज’वाफ दिएका थिए ।
अब, साम्राज्ञीले भूवन’को यो भनाइको पनि जवाफ दिएकी छिन् । भिडियोमार्फत जवाफ दिने क्रम’मा साम्राज्ञीले जापा’नमा आयोजित एक अवार्डमा सहभागी हुने क्रममा नायक केसीले आफूमाथि नरा म्रो व्यवहार गरेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
साम्राज्ञीले भनेकी छिन्–‘तँ त मेरो प्रो डक्ट हो । अब पुरानो कुरा को ट्याएर के फाइदा, तँ एउटा ठाउँमा पुगिसकिस्, अब य स्तो गर्नु हुँदैन भनेर संझाउनुभयो । त्यतिबेला मलाई भित्रैदेखि घिन पनि लागि रहेको थियो । तै पनि म हाँसेरै बोलेको थिएँ ।’
साम्राज्ञीले अगाडि भनेकी छिन्–‘ती कुराहरु केही टाढा बसेर पनि भन्न सकिन्छ नी । गाला जोडेर, टाँस्सिएर भन्नु पर्छ र ? छोर अब यस्तो नगर है भन्दै गालामा मुख जोडेरै भन्नुपर्छ र ।’साम्राज्ञीले भूवन केसीलाई ‘अंकल’ भनेको मन नपर्ने भन्दै आ’फूले ‘दाई’ भन्ने गरेको पनि बताएकी छिन् ।
साम्राज्ञीले आफ्नो भिडि’योमा भूवन केसीको नाम भने उच्चारण गरेकी छैनन् । तर, उनले लेखे’को स्टा टसमा आक्रो श व्यक्त गर्दै जवाफ दिएकी छिन् । उनले, आफूमाथि राम्रो व्यवहार भएको भए यस्तो दिन नै आउदै नथ्यो पनि भनेकी छिन् । नायक भूव’न केसीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘ड्रिम्स’ मार्फत नायिका शाहले डेब्यू गरेकी हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : भुवन केसीले साम्राज्ञीलाई ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइक’राई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् भनेपछी…..!!साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले शुक्रवार आफ्नो इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको एक भिडियोले यतिबे’ला फिल्म क्षेत्र तातेको छ ।
उक्त भिडियो’मा उनले ५ वर्ष’को अवधिमा आफूले ८ फिल्ममा काम गर्दा धेरै न राम्रो अनुभव भो गेको बताउँदै केही फिल्मको सुटिङ सेटमा खाना र पानी उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा निर्माता’रनिर्देशकले अपश ब्द बोल्ने गरेको भन्दै पी डा पोखेकी छन् ।
साम्राज्ञीको यो अभिव्यक्ति निर्माता तथा कलाकार भुवन के’सीतर्फ पनि केन्द्रित थियो । उनले थुप्रै पटक मिडि’यासँगको अन्तर्वार्तामा फिल्म ‘ड्रिम्स’ को सेटमा आफूले भोगेका नरा म्रा अनुभवहरु साटेकी छन् ।
तर, उनका भनाईहरुलाई नजर’अन्दाज गर्दै आएका निर्माता भुवन केसीले यसपटक भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै साम्राज्ञीलाई जवाफ फर्काएका छन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञीले शुक्रवार इन्स्टाग्राममा साझे’दार गरेको भि’डियोमा सुटिङ सेटमा खाना र पानी माग्दा केही निर्माता र निर्देशकले अपश ब्द बोलेको भनाईप्रति आक्रो शित हुँदै कलाका’र भुवन केसीले फेसबुकमा लेखेका छन्,
“खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जा’लमा रो इकराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फि’ल्मको नाम बेचेर खा’इरहेकी छिन् रु जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने ।”
उनले सामाजि’क सञ्जालमा गर्ने अभिनय फिल्ममा पनि गरेर देखाउन आग्रह गरेका छन् । सम्भवतः अभिने’ता केसी सामाजिक सञ्जालमा यसरी आक्रो शित भएर प्रस्तुत भएको पहिलो पटक हो । उनले आफू निर्देशित फिल्म ‘ड्रिम्स’ बाट साम्राज्ञीलाई अभिनेत्री’को रुपमा भित्राएका थिए । यो फिल्मको सफलतापछि साम्राज्ञी नेपाली फिल्मकी डि मान्डेड अभिनेत्री बनेकी थिइन् ।
फिल्मको सेटमा आफूमाथि निर्मातारनिर्देशकले गरेका नरा म्रा व्यवहार सुनाउँदै साम्रा’ज्ञीले शुक्रवारको भिडियोमा भनेकी थिइन्, ‘सुटिङ सेटमा खाना र पानी माग्दा कति निर्मा’तारनिर्देशकहरु आक्र मण शैलीमा आउँथे ।
उनीहरुको व्यहारबाट धेरै बेर रुन्थेँ अनि केही नभएजस्तो गरेर फेरि सुटिङ गर्थेँ । किनकि, मलाई कामसँग प्रेम छ । काम’को सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु ।’
Prevआज असार १६ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
Nextआज डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ : हेर्नुहोस्
कोरोनाबाट नेपालमा आज ५ जनाको मृ:त्यु , यी यी जिल्लाका हुन् मृतक…
दक्षिण कोरियामा फेरि एक नेपाली युवा गम्भीर बिरामी ! लाग्यो यस्तो रोग, सहयोगको याचना
सलह बेचेर पैसा कमाए यी बालबालिकाले
सुशान्तको निधन’पछि एक पछि अर्को अफ्ठेरोमा पर्दै सलमान
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (107849)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (104985)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (90022)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (85500)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (82693)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (79599)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (74591)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (70190)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69464)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (68527)
विवाहको मण्डपमै बेहुलीमा भूत`को आत्मा चढेपछि हंगा`मा !
कमल थापा`लाई हरा`उँदै राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन बिजयी
आज पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको डलरको भाउ
सुहागरातकै दिन बेहुलाको गोप्य कुरा थाहा पाएपछि बेहुलीले गरिन् हंगामा (भिडियो सहित)